Ungayifumana njani iTIN yakho? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Unokufumana njani i-ID yakho yentela?
Abahlali baseUkraine banokufumanisa i-TIN yabo kwisatifikethi esifunyenwe kwinkonzo yerhafu, ngoku, nangona kunjalo, i-TIN iphinde yabizwa ngokuba yinombolo yekhadi lomrhafi kwaye inkonzo yerhafu iphinde yabizwa ngegama lerhafu kunye nenkonzo yerhafu. Akukho enye inketho kuba ulwazi olunjalo aluthumelwanga kwi-Intanethi.
Kulula ngokwaneleyo ukufumana ukuba i-TIN yakho. Ukuba unayo ipaspoti yakho kunye ne-TIN kunye nawe, yiya kwiwebhusayithi yenkonzo yerhafu. Kukho inkonzo ekhethekileyo. Idatha yokundwendwela, igama kunye nomhla wokuzalwa apho.
Ikho enye indlela. Ukuba ungumnini wekhaya okanye imoto, ke kwirhafu minyaka le ufumana iirisithi. Apho, ngokuchasene negama lakho yiTIN yakho.
Ukufumana i-TIN yakho, yiya kwiwebhusayithi yeNkonzo yeRhafu, apho kufuneka ugcwalise ifomu efanelekileyo. Kwaye kwakhona, ukuba uthunyelwe ileta evela kwirhafu, i-TIN yakho iya kuboniswa kule leta, kuba wonke umntu une-TIN, nokuba uyifumene na okanye hayi.
Ukufumana i-TIN yakho, awuzukuqhakamshelana neofisi yerhafu, uchithe imali ekuhambeni nakwimigca emide, ulinde isigqebhezana ... Ukwenza oku, sebenzisa i-Intanethi. Yiya kwiwebhusayithi yeNkonzo yeRhafu yeRhafu yeRussian Federation, ugcwalise iphepha lemibuzo-kuya kufuneka ufake idatha yakho yobuqu kunye nedatha evela kuxwebhu oluqinisekisa ubungqina bakho (uchungechunge, inombolo, kukhutshwe ngubani kwaye nini uxwebhu olo), ke ungene kwi-Captcha. Ke uya kuyazi i-TIN yakho. Ingashicilelwa.
Inombolo yokwazisa ngerhafu inikwa umntu ngamnye kuMhloli wecandelo leeNkonzo zerhafu kunye nemisebenzi. Ukufumana isatifikethi sobhaliso kunye negunya lerhafu, kuya kufuneka uqhagamshelane nerhafu yakho kwindawo ohlala kuyo, ubhale ingxelo kwifom emiselweyo. Kwiofisi yerhafu, uya kwabelwa usuku onokufika ngalo ukuze ufumane isatifikethi esilungileyo, malunga neentsuku ezili-10 emva koko.I-TIN yakho iya kubhalwa kwisatifikethi osinikiweyo. Imvelaphi yesatifikethi kufuneka ibe sezandleni zakho kuphela, ngesicelo semibutho eyahlukeneyo ye-TIN yakho, kungcono ukubonelela ngefotokopi.
Ukuba andiphazami, isatifikethi seTIN sikhutshwa esikolweni. Fumana isatifikethi sakho kwaye uya kufumanisa inombolo yakho yeTIN. Ukuba ngokukhawuleza ufuna ukufumana i-TIN, kodwa akukho ndlela yakujonga isatifikethi, unokufumana indawo, kodwa oku kufuneka ufumane idatha yepaspoti.
Jonga iirisithi zerhafu oza nazo ngeposi.
Kwi-Intanethi apha http://www.gosuslugi.ru/
Kwiofisi yakho yerhafu, okanye kwiwebhusayithi yakhe. Iincwadi zezazisi, incwadana yokundwendwela iya kufuneka.
Ukuba unexesha kunye nokufikelela kwi-Intanethi, ungasebenzisa iinkonzo zayo kwaye uye kwiwebhusayithi ye-FN.S. (Federal tax Service) yaseRussia. Apho sibonisa khona idatha yakho kwaye sifumanisa ukuba indawo yakho yokuhlala. Yiyo kuphela idatha ekufuneka uyingenisile yokwenyani, ngokwencwadana yokundwendwela.
Okanye ukhetho lwesibini: lokufunda ngononophelo amaxwebhu akho, njengomthetho phakathi kwawo unokufumana indawo yakho yokuhlala.
Unokufumana inombolo yakho yesazisi somrhafi, hhayi ngokuqhagamshelana noMhloli weRhafu kuphela, kodwa nange-Intanethi. Ukwenza oku, gcwalisa ifomu lesicelo ecetywayo, ubonise iinkcukacha zakho kunye nokudlula ukukhangela ugaxekile (ukufaka iinombolo zentloko).
Nikeza le webhusayithi yenkonzo yasimahla yeNkonzo yeRhafu ye-Federal kunye nePortal yemicimbi yaseburhulumenteni neyomasipala.
Ukongeza kweyakho, unokufumana i-TIN yakhe nawuphi na omnye umntu, kodwa kule meko inkonzo ihlawulwe, kwaye unokufumana kuphela isiphumo umntu kwi-ofisi yerhafu emva kokuziswa kwencwadi yesazisi kunye neerisithi zentlawulo yenkonzo (okwangoku i-ruble ezili-100).
Uyazi njani i-TIN yomntu
Ungafumanisa ukuba yeyakho kunye neTIN yomnye umntu kwiwebhusayithi ye-Federal tax Service yaseRussia. Ukwenza oku, kuya kufuneka ugcwalise ifomu elifanelekileyo kwaye uthumele isicelo. Ngolwazi kwi-TIN engengobunini bayo, kuya kufuneka uye kuhlolo. Iimfuneko ezongezelelweyo zibonisiwe kwiphepha kwikhonkco elinikiweyo.
Ungayifumana i-TIN kwigunya lerhafu yendawo leyo, kuya kufuneka uye emhlanganweni, ubhale ingxelo, emva kweveki kuyakufuneka uthathe isatifikethi. I-TIN ayizukutshintsha nokuba utshintshe idatha yakho yokundwendwela.
exhonyiweyo iingcebiso zomthetho
Imibuzo ye-20 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,296.